Ngwaọrụ 7 gam akporo iji were ihe edeturu | Akụkọ akụrụngwa
Ngwaọrụ Ntụgharị Dị Oké Mkpa na gam akporo
Oge ndị ahụ mgbe akwụkwọ ndetu bụ ngwa ọrụ dị oke mkpa iji buru ebe niile (ọkachasị nzukọ) agaala, nke bụ isi n'ihi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaọrụ mkpanaka na ngwa raara nye ndi nke di taa.
Dika onu ogugu di iche iche nke ndi okachamara mere, gam akporo sistemụ bụ onye na-eduga ugbu a "ka nnukwu achicha", nke bụ ihe kpatara na anyị ga-eji obere oge na-agbalị depụta 7 ngwa nwere ike arụnyere na mobile ngwaọrụ na-eji dị ka a ọkaibe notepad.
2 2. Ekwentị OneNote
3 3. Akwụkwọ
4 4. Agba agba
5 5.InkPad Notepad
6 6. Google Nọgidenụ
7 7. Mfe okwu
Ntinye bụ ngwa ọrụ mbụ anyị ga-atụle n’oge a (nkenke). Nwere ike ịchọta ya na nyiwe dị iche iche, ịbụ nnukwu ihe ọzọ n'ihi na enyere ya ndị ọrụ niile n'efu. Na ya ị nwere ohere nke belata ozi na ibe weebụ nke mere na ha na-aha na ya interface. I nwekwara ike iji igwefoto were ụfọdụ njide, mepụta ndepụta nke ọrụ iji nyochaa n'oge ọ bụla, faịlụ na ncheta olu n'etiti ndị ọzọ ọzọ.
2. Ekwentị OneNote
Ngwaọrụ a Anyị nwekwara ike ịchọta ya na nyiwe dị iche iche, yana ngwaọrụ mkpanaka gam akporo bụ ndị nwere ọtụtụ ndị na-ege ntị. Na ya, anyị ga-enwe ohere ịmalite ịde ederede ederede, weghaara ozi sitere na ibe weebụ iji tinye ya dị ka ihe edeturu n'etiti ndị ọzọ ọzọ. N'ikwu okwu, iji OneNote Mobile ị nwere ike ịhazi edemede dị iche iche na agba dị iche iche taabụ, nke a bụ ihe na-adọrọ adọrọ nke na-adọta uche nke ndị ọrụ ọhụụ ọ bụla. Na gam akporo, OneNote Mobile nwere ike ịmepụta ihe ndekọ 500 na ụdị ya efu.
con Ntinye Anyị nwekwara ike ịkwadebe ndetu anyị, mepụta ndepụta nke ọrụ na ha, wepụta onyonyo sitere na webụ, were foto, mee ndepụta ịzụ ahịa, dekọba ụda olu na ọbụnadị mee ụfọdụ ụdị akara n'ime ngwa ọrụ ka e debanye aha ya dị ka mgbakwunye ọrụ. Obere usoro ị ga - enweta mmekọrịta na ngwa gam akporo a na akaụntụ Gmail inwe ike inyocha ha site n ’ebe ahụ. Ọzọ ọzọ mma bụ ekwe omume nke na-eme a ndabere oyiri nke niile anyị edebanyere aha, na Micro SD ebe nchekwa.
4. Agba agba
con AgbaNote Anyị nwekwara ohere ịdenye ụdị ọrụ dị iche iche dị ka ihe edetu n'ime interface nke ngwa gam akporo a. Ihe dị mfe bụ ihe e ji amata ya, ebee ndetu a ga-e dere na obere igbe na ụdị nke a ihennyapade. Ndepụta ụlọ ahịa, ozi, ozi email, ederede dị mfe ma dịkwa mfe bụ ihe anyị nwere ike ime na ngwa ọrụ a.
Ihe na-akpali mmasị banyere a android ngwa nọ na mmekọrịta mmekọrịta. Nke a pụtara na ihe edeturu anyị na-enweta na ekwentị mkpanaaka enwere ike nyochaa ebe ahụ ma ọ bụ na weebụ, na-aga maka ikpe ikpeazụ na
6. Google Nọgidenụ
Na a otutu myirịta na gam akporo ngwa na anyị kwuru n'elu, Google Nọgidenụ na-enye anyị ohere ike Ihe ncheta edere bụ na anyị nwere ike ịkekọrịta ndị enyi ma ọ bụ ezinụlọ (họrọ); Ndenye ndetu, ọrụ anatara, foto ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ọrụ bụ ihe anyị nwere ike nweta aha na Google Nọgidenụ, ya isi mma bụ ekwe omume nke iji dị iche iche nke na agba ọ bụla aha. N'ihi mmekọrịta ya na weebụ, a ga-enyocha ndetu nke mepụtara na Google Keep na keep.google.com
7. Mfe okwu
Dị ihe ndetu ma ọ bụ ihe ncheta ọ bụla anyị chọrọ ịdekọ nwere ike ime Ihe dị mfe; na interface nwere a minimalist imewe, nke a bụ ihe kpatara idezi ihe edeturu ederede bụ ọrụ dị mfe na ngwa ngwa iji rụọ. Na mgbakwunye na nke a, anyị nwere ike iji obere iko na-eto eto nke dị n'akụkụ aka nri nke interface ahụ, n'okwu ikpe na anyị nwere ọtụtụ n'ime ha debara aha.
Na ndị a gam akporo ngwa na anyị kwuru, ị nwere ike nnọọ mfe na-esi na wụnye nke ọ bụla n'ime ha na mobile ngwaọrụ (ekwentị ma ọ bụ mbadamba) na sistemụ arụmọrụ gam akporo, na-emeziwanye ihe omume ntụrụndụ gị ma ọ bụ nrụpụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Ngwaọrụ Ntụgharị Dị Oké Mkpa na gam akporo
8 Ngwa Android maka Nkata ma ọ bụ Nnọkọ vidiyo
Etu esi etinye ihe omume Facebook ma ọ bụ akụkọ na ụbọchị gara aga